Nnukwu ọzara isii nke Asia nke ị na-agaghị echefu | Akụkọ Njem
Nnukwu ọzara Asia
Mariela Carril | | Ihe ị ga-ahụ, Syria, Asia njem
Ọzara bụ ebe ọ na-enweghị mmiri ozuzoỌ bụ ezie na ọ bụghị ya mere na anyị kwesịrị iche na ọzara enweghị ụdị ọ bụla nke ndụ. Ọ na-eme, dịkwa ka enwere ọzara kpọrọ nkụ ma nwekwaa obere ahịhịa ma ọ bụ anụmanụ, e nwere ndị ọzọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'ụzọ nke ha, ubi mkpụrụ osisi.
Mgbe anyị lere anya na map nke ọzara nke ụwa, anyị na-achọpụta na enwere oke ọzara na North Africa na n'ọtụtụ Eshia. N’Esia enwere ihe dịka ọzara iri abụọ na atọ ma ọ bụ ọkara ọzara, ala ịkpa nke oge ochie na ndị ọzọ na-akpụ. Ma enwere ụfọdụ ndị pụrụ iche na ndị ama ama ma ha dị nnukwu ọzara Asia.
1 Ọzara Arebia
2 Ọzara Gobi
3 Ọzara Karakum
6 Ọzara Thar
Nke a bụ nnukwu ọzara, nke 2.330.000 square kilomita, nke si Yemen na-aga n’Ọwara Oké Osimiri Peshia na Oman ruo Iraq na Jọdan. Ọzara ahụ dị na Middle East, ọdịda anyanwụ Eshia, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dị na Arab Peninsula. Ọ bụ Akọrọ ihu igweEnwere dunes na-acha uhie uhie, ájá na-enweghị ntụ na okpomọkụ na-agbaze n'ehihie, nke 46ºC, ma na-agba oyi n'abalị.
Speciesfọdụ ụdị osisi na ahịhịa nke anụ ọhịa ka a nabatara ebe a ma ndị ọzọ lara n'iyi n'ihi uto nke obodo na ịchụ nta mmadụ na-aga n'ihu. Ọzara Eshia a bara ọgaranya na sọlfọ, phosphates na gas na mmanu a na-echekwa na ikekwe ihe ndị a bụ ndị na-etinye nchekwa ya n'ọnọdụ ha.
Ọ bụ nnukwu ala ịkpa nke bi akụkụ nke China na Mongolia. Ugwu Himalaya na-egbochi igwe ojii nke na-eweta mmiri site n'Oké Osimiri India otú ahụ ka ọ dị ala akọrọ, nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na mmiri adịghị. O nwere mpaghara nke square kilomita 1.295 na ọ bụ ọzara kasịnụ n'Eshia.
Gobi abụghị ọzara nke nwere ọtụtụ ájá ma ọtụtụ akwa ya ghere oghe. N'otu oge ahụ ọ bụ a oyi oyiỌbụna ọ nwere ike ifriizi na ọbụnadị ịhụ dunes nke snow kpuchiri. Ihe niile n’ihi na ọ dị n’ebe dị elu, n’agbata mita 900 na 1520. -40ºC bụ ọnọdụ nwere ike ime n'oge oyi ma 50ºC n'oge ọkọchị dịkwa na mbụ.
Gobi bụ otu n'ime ọzara ndị ahụ na-adịghị eguzoro ma na-aga n'ihu na-eto, ọ na-emekwa nke a n'ike n'ike n'ihi oke ọsọ ọsọ. usoro ọzara na ị na-enweta. Na ee, ọ bụ ama n'ihi na ọ bụ ebe akwa nke alaeze Mongol, nke Genghis Khan.
Ọzara a dị na etiti Asia na Turkish ọ pụtara aja ojii. Ọtụtụ ala ịkpa dị n’ala ndị dị na Turkmenistan. O nweghi otutu ndi mmadu nakwa Mmiri na-ezo nke ukwuu. N'ime ya bụ ugwu ugwu, Ugwu Bolshoi, ebe achọtara ihe okwute mmadụ, ọ ga - abụkwa nnabata olulu maka ndị kpebiri ịga ya.
Ọzara a nwekwara mmanụ na gas gas. N'ezie, n'ime ebe a bụ ama Door ka Hel, na Ndagwurugwu Darvaza, ubi gas nke dara na 1971. Kemgbe ahụ, a na-agbanye ọkụ na-adịgide adịgide na nzube, iji zere ihe ize ndụ: ọ dị mita 69 n'obosara na mita 30 dị omimi.
N’ikpeazụ, ụfọdụ egwu narị afọ na-agafe ya: ọ bụ Traingbọ okporo ígwè Trans-Caspiano Ọ soro ụzọ Silk, ọ bụkwa Ọchịchị Russia rụrụ ya.
Ọzara a dị na Central Asia na aha ya na Turkish pụtara aja uhie. Ọ dị mma n'etiti osimiri abụọ ma taa, ọ na-enweta ala nke mba atọ: Turkmenistan, Uzbekistan na Kazakhstan. Ọ nwere 298 puku kilomita abụọ.
Ọtụtụ n’ime ọzara a nwere ájá ọcha ha dịkwa ụfọdụ oases. N’akụkụ osimiri abụọ ahụ na-apịa ya na n’ala ahịhịa ndị a, e nwere ụfọdụ obodo ndị ọrụ ugbo.
Ọzara a dị n'ime China, na Xinjiang Uyghur Autonomous Region, mpaghara nwere ọtụtụ ndị Alakụba. Ndi ugwu gbara ya gburugburu na ugwu na odida anyanwu ya na Goni Desert n’onwe ya gbara ya gburugburu n’ebe owuwa anyanwu. Ọ enyene mpaghara nke 337 puku square kilomita na ihe karịrị 80% nke dunes ya na-agagharị na-agbanwe agbanwe ala mgbe niile.
China wulite uzo di elu na-ejikọ Luntai na Hotan, obodo abụọ. Dị ka ọzara Gobi, Himalaya na-eme ka igwe ojii zoo, yabụ ọ bụ ọzara kpọrọ nkụ, na oge oyi, okpomọkụ nwere ike ịdị n'okpuru 20 ºC. Enwere obere mmiri ka oases bara uru.
A maara Al Thar dị ka Nnukwu Ọzara India ọ bụkwa mpaghara ala kpọrọ nkụ nke na-arụ ọrụ dị ka oke ala dị n'etiti India na Pakistan. Ọ bụ ọzara subtropical ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka percentages, ihe karịrị 80% nke ya bụ na mpaghara India ebe ọ na-ekpuchi 320 puku kilomita kilomita.
Thar nwere akọrọ, n’akụkụ ọdịda anyanwụ, na mpaghara ọzara ọkara, n’ebe ọwụwa anyanwụ, na dunes na ntakịrị mmiri ozuzo. Ọtụtụ n'ime ọzara India a bụ na-agbanwe dunes Ha na-ebugharị karịa oge monson n'ihi oke ifufe.
Ọzara a nwere otu osimiri, naanị otu, Luni, na obere mmiri ozuzo na-ada na-etiti July na Septemba. Enwere ụfọdụ nnu mmiri nnu nke jupụtara na mmiri ozuzo ma pụọ ​​na oge ọkọchị. Ma Pakistan ma India ewepụtala ụfọdụ ebe "Ebe echekwara ma ọ bụ ụlọ nsọ nkịtị". Antelopes, dezelles, ihe na-akpụ akpụ, ịnyịnya ibu ọhịa, nkịta ọhịa na-acha uhie uhie na ụdị nnụnụ dị iche iche bi na ya.
Thar nwere ihe dị iche na nke ahụ ọ bụ ọzara kachasị mmadụ bi n’ụwa. Ndị Hindu, ndị Alakụba, ndị Sikh, Sindhis na Kolhis bi, ụfọdụ n’India, ndị ọzọ nọ na Pakistan, n’ọnụọgụ nke mmadụ iri asatọ na atọ n’otu kilomita kilomita abụọ raara onwe ha nye anụ ụlọ na ọrụ ugbo ma nwee ndụ ọdịbendị bara ụba nke gụnyere ememme ndị mmadụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Ihe ị ga-ahụ » Nnukwu ọzara Asia
Ebe Oke Osimiri Ugwu zutere Baltic